कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल पाइन्छ ? जानिराखौ ! « Online Tv Nepal
कस्तो सपना देख्दा कस्तो फल पाइन्छ ? जानिराखौ !
Published :6March, 2020 6:36 pm
हामिले धेरै जसो सपना देखिरहेका हुन्छौ । कहिले राम्रा सपना देख्छौ त कहीले नराम्रा पनि । हामिले कस्तो सपना देख्दा के फल पाइन्छ भन्ने जान्ने इच्छा पनि सबैलाई हुन्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार केही यस्ता सपना छन् जुन देख्दा हामिले राम्रो फल प्राप्त गर्छौ । केहि सपनाले त हाम्रो भाग्न नै बदल्ने गर्छ ।
शुभ सपनाले काम सम्पन्न हुने संकेत पनि गर्छ !
शास्त्रका अनुसार रातको पहिलो प्रहरमा देखिएका सपनाको फल वर्षदिन भित्र मिल्ने गर्छ भने दोश्रो प्रहरमा देखिएको सपना ६ महिनामा र तेश्रो प्रहरमा देखिएको सपनाको ३ महिनामै प्राप्त हुने बताइन्छ । विहान पख देखिएको केहि यस्ता सपना हुन्छन् जसको फल तुरुन्त नै मिल्छ । खराब सपना देखेमा बिहान अरुलाई भन्दा फल नास हुन्छ ।
शास्त्र अनुसार विहान उठेर शिवको नाम जप्दा पनि सपनाको फल नाश हुन्छ । सपनामा भैसी देखेमा धन प्राप्ति, सेतो नाग देखेमा धन प्राप्ति, बाघमा सवार भएको देखेमा प्रतिस्पर्धामा विजय भइन्छ । त्यस्तै, सपनामा सिंह तथा डमरु देखेमा सन्तान प्राप्ति, परेवा वा आफ्नै मृत्यु देखेमा खराब रोगबाट मुक्ति मिल्छ । सपनामा पति वा पत्नि देखेमा दाम्पत्य जीवन प्रेममय बन्छ ।
गाई देखेमा भौतिक सुख हुने गर्छ । त्यस्तै सपनामा गाईको दुध दुहेको देखेमा मनोकामना सिद्ध हुन्छ । सपनामा रक्सि देखेमा धार्मिक कार्यमा रुची हुन्छ । त्यस्तै, हात्तीमा सवार भएको देखेमा राज्यबाट लाभ हुन्छ । सपनामा पैसा देखेमा धन प्राप्ती हुन्छ । सपनामा पुजा गरेको देखेमा योजना सफल हुन्छ ।